OpenRGB 0.6 inouya nerutsigiro rwekutsigira, kugadzirisa bug uye zvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva mashoma apfuura kuburitswa kweshanduro nyowani yeOverRGB 0.6 yakaziviswa iyo inoratidza kuwedzera kwewedzero-dzinovandudza ruzivo rwevashandisi, pamwe nekuwedzera kwerutsigiro rwezvimwe zvishandiso nemapuratifomu, kuwedzera kune izvo zvimwe zvigadziriso zvakaitwawo mushanduro iyi nyowani.
Kune avo vasina kujairana neOpenRGB, vanofanirwa kuziva kuti iRGB yekuvhenekesa mudziyo wekutonga software uye iri kuita kwakapihwa kwakasimba Iyo inotsigira akawanda mazera evatongi veAura pane Intel uye AMD mapuratifomu, ayo inobvisa kudiwa kwekuisa zvikumbiro zvepamutemo zvepamutemo ayo akasungirirwa kune chaicho chigadzirwa.
OpenRGB inoenderana neAura madhiraivha anoenderana inoshandiswa mumhando dzakasiyana dzeRGB memory module vagadziri vanosanganisira G.Skill Trident Z RGB nevamwe.
Iyo purojekiti inopa raibhurari yemabasa neyakajairwa API kudzora backlight yekushandisa, chinoshandiswa chekunyaradza uye graphical interface muQt. Inotsigira iyo sarudzo yemavara shanduko modes (color wave, nezvimwewo), kutonga kwenzvimbo dzemwenje kumashure, kushandiswa kwemhedzisiro mhedzisiro, kududzirwa kweiyo dhizaini uye kuwiriranisa kwechiedza chemberi nezviito zvakaitwa (mumhanzi wemuvara, nezvimwewo).
1 Main nyowani maficha eOverRGB 0.6
2 Maitiro ekuisa OpenRGB paLinux?
Main nyowani maficha eOverRGB 0.6
Mune iyi vhezheni itsva yeOverRGB 0.6 hurongwa hwekupedzisa hunoratidzwa iyo inowedzera mushandisi mushandisi, pamwe neiyo lVagadziri veOverRGB vakagadzirira akateedzana emapulagi iine otomatiki kugadzirisa yekumisikidza system, injini yekuwedzera mhedzisiro, mepu yekuona uye kumisikidza kweE1.31 protocol.
Zvezvigadzirwa Razer, mumwe mutyairi akagadzirwa kutsiva OpenRazer nekuda kwenhamba hombe yekutadza uye kunonoka kubvuma kugadzirisa kubva kune yekupedzisira; Kugonesa mumwe mutyairi, iwe unofanirwa kudzima OpenRazer mune iyo OpenRGB marongero.
Nezve kuvandudzwa kwekutsigirwa, zvinoratidzwa izvo limited macOS tsigiro yakawedzerwa yeIntel uye ARM zvivakwa nepo rutsigiro rwakawedzerwa rwuri rweASUS, MSI, Gigabyte GPUs uye EVGA GPU modes zvakawedzerwa.
Nezve kugadziriswa kwakaitwa, zvinotaurwa kuti bhagi rakagadziriswa zvichikonzera iro rekudzorera mwenje kupisa paMSI MysticLight mamaboard. Tsigiro yeiyi nhepfenyuro inogoneswazve kumabhodhi atoedzwa kare, vanogadzira vanopa rubatsiro kudzoreredza mwenje mashandiro akakuvara nekumhanya vhezheni dzekare dzeOverRGB.
Logitech mbeva mutyairi kodhi yakabatanidzwa kudzikisa kodhi yekudzokorodza, modes nyowani dzekushanda dzave kuwedzerwa, uye isina waya yekubatanidza yakagadziridzwa.
Wakawedzera QMK rutsigiro (inoda manyorerwo gadziriso).
Wakawedzera rutsigiro rweTPM2, Adalight protocols yeArduino based controllers.
Nezve runyorwa rwezvishandiso zvitsva zvinotsigirwa, tinogona kuvabvunza pano. Finalmente unogona kutarisa kuenderana kwehardware izvo parizvino zvinotsigira izvi zvinoshandiswa mu chinotevera chinongedzo.
Maitiro ekuisa OpenRGB paLinux?
Kune avo vanofarira kugona kuisa OpenRGB pane yavo system, ivo vanofanirwa kuteedzera rairo dzatinogovana pazasi.
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita ndeche gadza yazvino vhezheni yeQt Musiki. (Unogona kutarisa ruzivo rwekuiswa kweQt Musiki mu chinongedzo chinotevera).
Muchiitiko cheUbuntu uye zvigadzirwa tinofanirwa kuisa zvimwe zvinotsamira:
Iye zvino tava kuzotora zvinoshandiswa nemutemo:
Waita izvi izvozvi isu tinofanirwa kugadzirisa zvinyorwa zvidiki:
Uye pano tinogona kuita zvinhu zviviri, chimwe chazvo kuvhura chirongwa ichi nemugadziri weQT kana kuchimisikidza muhurongwa.
Kuti ubatanidze, ingo mhanya unotevera mirairo:
Pakupera kwekuumbwa isu tinofanirwa kubvumidza mukana weSMBB.
MuIntel tinogona kuzviita nemirairo:
Kana mune iyo AMD, isu tinofanirwa kutanga tanyora vatyairi veSMBB vane:
Kana kamwe mutongi achinge aonekwa, tinofanirwa kupa mvumo kumutungamiriri, semuenzaniso:
Chekupedzisira, inofanirwa kutariswa kuti kuchine zvimwe zvinokwanisa kuramba zviripo mukutangazve kwese, asi iko kushanda kukuru kwekumisikidza mavara nema modhi kwakagadzikana.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo unogona kutarisa ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » OpenRGB 0.6 inouya nerutsigiro rwekutsigira, kugadzirisa bug uye zvimwe
GOverlay: kugadzirisa zvakapetwa mumitambo pasi peLinux